घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ”! पुरा पढनुहोस – News543Online
घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ”! पुरा पढनुहोस
March 27, 2021 adminLeaveaComment on घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ”! पुरा पढनुहोस
क”ठै कस्ता पा’पी आमा बुवा; बच्चा जन्माएर जं’गलमा यसरी छा’डे पछि बच्चा मृ”त अवस्थामा फे’ला